China 55 HRC Carbide4Flute Standard အရှည်ထောင့် Radius End End Mills ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူများ | မင်္ဂလာဆောင်
55 HRC Carbide4Flute စံအလျားထောင့်အချင်းဝက်အဆုံးစက်များ
ကျွန်ုပ်တို့သည် Solid Carbide Corner Radius End Mills ကိုကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးစျေးကွက်တစ်လျှောက်လုံးတွင်သူတို့၏အရည်အသွေးကောင်းခြင်း၊ တာရှည်ခံခြင်းသက်တမ်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်ရှုထောင့်ဆိုင်ရာတိကျမှန်ကန်မှုတို့အတွက်လိုအပ်သည်။ ဤ Carbide End Mill ထုတ်ကုန်များကိုစက်မှုလုပ်ငန်း ဦး ဆောင်သည့်စျေးနှုန်းဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။
4. အထူးစက်ဆီချောဆီ - အမဲဆီ
7. Anti-Foam Emulsions: ဆီလီကွန်ဆီ
9.material: carbide သတ္တုစပ်
စံdD L1 L
4R0.3x4x11x50 ၀.၃411 50
ရှေ့သို့ 55 HRC Carbide4Flute Roughing End Mill
နောက်တစ်ခု: 55 HRC NC အစက်အပြောက်လေ့ကျင့်ခန်း
4 Flute End Mill လူမီနီယမ်